I-Amplero: Indlela Encane Yokunciphisa Ikhasimende Churn | Martech Zone
Uma kukhulunywa ngokunciphisa ukukhwabanisa kwamakhasimende, ulwazi lunamandla ikakhulukazi uma lusesimweni sokuqondisisa kokuziphatha okunothile. Njengabamakethi senza konke okusemandleni ukuqonda ukuthi amakhasimende aziphatha kanjani nokuthi kungani eshiya, ukuze sikwazi ukukuvimbela.
Kepha lokho abathengisi abavame ukukuthola yincazelo ye-churn kunokuba isibikezelo sangempela sengozi ye-churn. Manje ufika kanjani phambi kwenkinga? Ubikezela kanjani ukuthi ngubani ongashiya ngokunemba okwanele nesikhathi esanele sokungenelela ngezindlela ezinomthelela ekuziphatheni kwabo?
Kuze kube manje abathengisi bezama ukubhekana nenkinga ye-churn, indlela yendabuko yokwenza imodeli yokukhwabanisa kube "ukuthola" amakhasimende. Inkinga yokuthola amagoli we-churn ukuthi amamodeli amaningi wokugcina alinganisa amakhasimende ngesikolo esincike ekudaleni ngesandla izimfanelo ezihlanganisiwe endaweni yokugcina idatha nokuhlola umthelela wazo ekuthuthukiseni ukuphakanyiswa kwemodeli ye-static churn. Le nqubo ingathatha izinyanga ezimbalwa, kusukela ekuhlaziyeni ukusebenza kwamakhasimende ngokusebenzisa amaqhinga wokumaketha wokugcina. Ngaphezu kwalokho, njengoba abathengisi bebuyekeza izikolo zamakhasimende njalo ngenyanga, amasiginali aqhamukayo akhombisa ukuthi ikhasimende lingahamba awaphuthelwa. Njengomphumela, amaqhinga wokumaketha wokugcina asephuzile kakhulu.
Amplero, esanda kumemezela ukuhlanganiswa kwendlela entsha yokumodela yokuziphatha ukuze ikhuthaze ukwenza ngezifiso kokufunda komshini wayo, inikeza abathengisi indlela ehlakaniphile yokubikezela nokuvimbela ukuqhuma.
Kuyini Machine Ukufunda?
Ukufunda ngomshini uhlobo lobuchwepheshe bokufakelwa (i-AI) olunikeza amasistimu amandla okufunda ngaphandle kokuhlelwa ngokusobala. Lokhu kufezwa ngokwedatha eqhubekayo yokondla nokuba ne-software eguqula ama-algorithm ngokususelwa kwimiphumela.
Ngokungafani namasu wokumodela we-churn wendabuko, i-Amplero ibheka ukulandelana kokuziphatha kwamakhasimende ngamandla, ukuthola ngokuzenzakalela ukuthi yiziphi izenzo zamakhasimende ezinengqondo. Lokhu kusho ukuthi umakethi akasathembeli esilinganisweni esisodwa, sanyanga zonke esibonisa ukuthi ngabe ikhasimende lisengozini yokushiya inkampani. Esikhundleni salokho, ukusebenza okunamandla kwekhasimende ngalinye kuhlaziywa njalo, okuholela ekumaketheni okugcina ngesikhathi.
Izinzuzo ezibalulekile zendlela yokumodela ye-Amplero yokuziphatha:
Ukunemba okwengeziwe. Ukumodeliswa kwe-Amplero's churn kusekelwe ekuhlaziyweni kokuziphatha kwamakhasimende ngokuhamba kwesikhathi ukuze ikwazi ukubona zombili izinguquko ezicashile ekuziphatheni kwamakhasimende, futhi iqonde umthelela wemicimbi engajwayelekile. Imodeli ye-Amplero nayo ihlukile ngoba ivuselelwa ngokuqhubekayo njengoba kunemininingwane emisha yokuziphatha. Ngoba amaphuzu e-churn awaze aphelelwe yisikhathi, akukho ukwehla kokusebenza ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuqagela vs. okusebenzayo. Nge-Amplero, ukumodeliswa kwe-churn kubheke phambili okuholela ekhonweni lokubikezela ukuqhuma emasontweni ambalwa ngaphambili. Leli khono lokwenza izibikezelo ngezikhathi ezibekiwe livumela abathengisi ukuthi bahlanganyele amakhasimende asathembisene nomshado kodwa kungenzeka aqhume ngokuzayo ngemiyalezo yokugcinwa nokunikezwa ngaphambi kokuba afike ezingeni lokungabuyi futhi ahambe.
Ukutholwa okuzenzakalelayo kwezimpawu. I-Amplero ithola ngokuzenzakalela amasiginali ayimbudumbudu, angabonakali ngokususelwa ekuhlaziyeni ukulandelana kokuziphatha kwekhasimende ngokuhamba kwesikhathi. Ukuhlola okuqhubekayo kwedatha kuvumela ukutholwa kwamaphethini enziwe asezingeni lokuthenga, ukusetshenziswa, namanye amasiginali wokuzibandakanya. Uma kunezinguquko emakethe yokuncintisana okuholela ekuguqulweni kokuziphatha kwamakhasimende, imodeli ye-Amplero izovumelana ngokushesha nalezi zinguquko, ithole amaphethini amasha.
Ukuhlonza Kusenesikhathi, lapho ukumaketha kusasebenza. Ngoba imodeli ye-churn elandelanayo ka-Amplero ifaka idatha yokufaka eyimbudumbudu kakhulu, isikhathi esincane kakhulu siyadingeka ukuthola amaphuzu ngempumelelo kumakhasimende, okusho ukuthi imodeli ka-Amplero ingakhomba ama-churners ngokuhlala okufishane kakhulu. Imiphumela yokumodeliswa kokuqina ifakwa njalo kungxenyekazi yokumaketha yokufunda ye-Amplero ethola futhi isebenzise isenzo sokumaketha esifanelekile kwikhasimende ngalinye kanye nomongo.
Ngabamakethe be-Amplero bangafeza ukunemba kokubikezela okungcono okungama-300% futhi kuze kufike ku-400% wokumaketha okungcono kunalapho besebenzisa amasu wokumodela wendabuko. Ukuba nekhono lokwenza izibikezelo zamakhasimende ezinembe kakhudlwana futhi ezifika ngesikhathi kwenza wonke umehluko ekukwazini ukuthuthukisa amandla okusimama okunciphisa ukuqhuma nokukhulisa inani lempilo yamakhasimende.
Ngeminye imininingwane noma ukucela idemo, sicela uvakashele Amplero.
Tags: kakhuluAma-Globysukufunda imishiniukuzenzelaukukhombaimithetho yokubhekisa